TRICKS AH EE DELPHINIUM SII KORDHAYA, BEERITAANKA IYO DARYEELIDDA WARSHAD - WARSHAD ORNAMENTAL KORAYA
Delphinium ama bog waa mid aad u weyn beertaada. Bannaanka ayaa si fudud u adkaa. Duufaannada candhuufta ah ee xayawaanka ka sarreeya inta ka hartay noocyada, iyaga oo siinaya sharafka beerta iyo naqshadeynta.
Ubax ee delphinium si fiican u dulqaadan labada abaarta iyo dhaxan. Burooyinka Terry ee foomamka xiiso leh iyo midabada ayaa marnaba ku siin doonaa caajisnimo beertaada.
Delphinium wuxuu saameeyaa noocyo kala duwan iyo noocyo, qiyaastii 400 wakiil oo aad u fiican. Nidaamka midabka ee midabka warshadani waa kala duwantahay, laakiin qaabka ugu caansan ee muuqaalka muuqaalka ayaa ah buluug buluug ah, oo hubku hubaal yahay inuu hodan yahay. Delphinium Blooms 2 jeer sanadkii, taas oo suurtogelisa in ay laba jeer ku raaxaystaan ​​quruxdiisa.
Maxaa jecel delphinium, doorashada ee goobta iyo ciidda
Delphinium - warshad, beerid iyo daryeel aan u baahnayn dadaal badan. Si aad u hesho kobcinta iyo daryeelka ee delphinium, waxaad u baahan tahay inaad hesho meel sax ah. Geedkani wuxuu jecel yahay qorraxda, laakiin wuxuu ka baqayaa meelaha bannaan. Sidaa darteed, waxaan dooranaynaa meel ku haboon isaga.
Waa muhiim! Marka la beero delphinium, hubi in ay qorraxda ka hor casho, iyo ka dib - waxaa lagu xanaaneeyay hooska qayb ahaan.
Sida ugu dhakhsaha badan aad ku beeran delphinium, hubi in ciidda waa composted ama digada cad, kaas oo bixin doona ubax badan oo qani ah ubax.
Delphinium si fiican ayuu u sameeyaa xilli qabow. Waxay u adkeysan kartaa heerkulka hooseeya, illaa -40 ° C. Markaad beerto a delphinium waxaad u baahan tahay, marka hore dhan, si aad u hesho meel sax ah. Dhoobi dhulka iyo rusheeyo bacriminta, compost ama humus. Laakiin waxaas oo dhan waa in lagu sameeyo dhexdhexaad ah, tan iyo, inkastoo inkastoo aan qabyo ahayn, ma ixtiraamo ciidda acidic.
Ma taqaanaa? Cufnaanta carrada waxay saameyneysaa midoobida midabka delphinium.
Sida loo abuuro delphinium
Delphinium ayaa si kala duwan u koray. Dadka qaarkood waxay ku beeraan isla markiiba (oo ay ka buuxaan ubax goor dambe ah iyo dhimashada geedka), qofna marka hore wuxuu ku koraa cayayaanka dhalinyaro ah ee kaarbajiya, ka dibna wuxuu ku beeraa ciidda si gaar ah loo diyaariyey ee mustaqbalka ninkii qurxoon.
Ceelasha waa in ay ahaataa 4-5 cm qoto dheer. Masaafada u dhexeysa ubaxa waa in si madaxbanaan loo go'aamiyaa, waxay ku xiran tahay xajmiga dhirta mustaqbalka (20-30 cm). Carrada aad ka soo bixisay godadka loogu talagalay dhirta dhalinyarada ah waxaa lagu qasi karaa peat ama khudaarta cagaaran 1: 2, daboolka ugu hooseeya ee cayayaanka leh, ka dibna ku beeri dhirta.
Waa muhiim! Marka transplanting dhirta dhalinyarada, ma aha lagama maarmaan in ay daboolaan qoorta asalka leh dhulka oo qoto dheer heerka heerka.
Sida loo biyo iyo quudiyo ubax aan caadi ahayn
Si aad u daryeesho a delphinium waa mid fudud oo wacan. Qarsoodiintiisu waxay ku fiican tahay dhammaan dhinacyada daryeelka.
Warshadani waxay u baahan tahay waraabinta, jaridda, bacriminta, manjooyin, taageerid sameynta. Ubaxa wuxuu qabaa jiilaal weyn, sidaas darteed uma baahnid in la daboolo ama lagu beddelo tuubooyin. Delphinium wuxuu bilaabaa inuu bilaabo Juun.
Inta lagu jiro xilliyada abaarta, cayayaanka waxay u baahan yihiin waraabinta, laakiin waa in aysan iloobin in aysan jeclayn biyo taagan, sidaa daraadeed ha qarqin. Waraabinta loo baahan yahay asaasiga ah, haddii kale, haddii biyo helo on caleemaha, geedka guban doonaa.
Iyada oo daryeel ku habboon, delphinium Blooms ilaa 50 maalmood. Mar kasta oo aad u baahato in aad gooyso afuufka hoos u dhaca. Iyadoo waraabinta joogto ah iyo manjooyin, waxaad sidoo kale ku farxi kartaa delphinium ubax dayrta.
Warshaduhu sidoo kale waxay u nugul yihiin cudurro kala duwan iyo cayayaanka - collar qallalan, caarada budada, caarada, cudurada viral, caarada caarada, dufinium duulimaad, iwm.
Xilliga ugu fiicani ee koritaanka a delphinium waa 3 sano. Ha ka tagin dheer, sida asaasiga dhexe ee dhirta baadiyaha, iyo dhirta lumiyo ubax.
Waa muhiim! Ka dib markii xilli ubax, waxaa lagama maarmaan ah in la gooyo ubax dhintay, ka dibna delphinium ku farxi doonaa xilli ciyaareedka soo socda leh muuqaal quruxsan.
Xakamaynta nadiifinta iyo xeerarka garka
Afduubka delphinium wuxuu u qaybsan yahay 2 marxaladood:
Marxaladda koowaad, marka caleemaha gaarto 20-25 cm, waxaa lagama maarmaan ah in la jebiyo caleemaha daciifka ah iyo kuwa khafiif ah, oo ka tago kuwa ugu xooggan (ilaa 5). Tani waxaa la sameeyaa si ay dhirtu u dhaqaan khayraadkeeda dhammaan caleemaha, sababtoo ah ma jiri doonto ubax qurux badan labadaba mid weyn ama mid yar. Tani waa wax kasta oo kiiskan u baahan yahay daryeelka delphinium guga iyo xilliga xagaaga hore.
Marxaladda labaad ayaa ah marxaladda soo noqoshada. Waxay kuxirantahay haddii aad rabto inaad ka baxdo abuurka ama maahan. Waxaad si fudud u gooyaa ubax oo ku rid mariin, ama waxaad ka bixi kartaa biqilka ilaa dayrta, si ay midhaha u bislaadaan beeritaanka sanadka soo socda.
Waa muhiim! Ka dib markii ubax, qurxinta qurxinta ubaxyada iyo esteemka ayaa lumay. Waxay saameysaa muuqaalka beertaada.
Delphinium wuxuu kaloo u baahan yahay garqaadaha. Ka dib markii aad khafiifisay caleemaha oo ka tagay ugu xoogan, ka dib markii 1.5-2 toddobaad, marka koritaanka caleemaha ku dhowaan doonaa 0.5 mitir, waxaad u baahan tahay in ay sameeyaan garter.
Diyaargarow dheeraadka ah horay u sii dheji daboolka duurjoogta. Ka dibna xadhig walbo kasta oo ka baxsan geedka. Garters waa in laga sameeyo maro, sida twin wuxuu dhaawici karaa dhuuban dhuuban.
Xilliga dayrta, marka caleemaha warshadu mar hore u dhinteen, caleemaha waa in aan la gooyin. Waxay yihiin tuubo - biyo iyo biyo ayaa halkaas ka heli kara, ka baxaya geedka cayayaanka ah ee guga.
Waa muhiim! Marka rakibida dharka, hubi in aanay waxyeello u gaysatay dhirta geedka.
Sida loo faafiyo delphinium
Aragtida delphiniums waa mid aad u ballaaran oo kala duwan. Waxaa jira noocyo badan oo sanadle ah, sanadlaha ah iyo kuwo la soo dhaafay. Kuwa ugu wanaagsan iyo kuwa ugu ballaadhan waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin isweydaarsiyo dhaqameed ama dhaqameed. Delphinium waxaa lagu faafiyaa dhaqanka iyo inta badan, sida aad ogtahay, habka la awoodi karo - in la beero delphinium ka soo abuur, iyo sidoo kale qaybta xididka laftiisa. Delphinium waxay u baahan tahay in la gooyo kala-badhkii, kadibna waxay ku jiri doontaa weelkaaga ilaa 12 maalmood.
Da 'kasta oo eeygu jeclaan maayo nooca taranka. Xitaa haddii aad la wadaagto geedo yar yar, oo aan ahayn dhirta qaangaarka, qaar ka mid ah waxay u badan tahay inay u dhintaan. Markaad kala tagto xididka, waxaad u baahan tahay inaad la xiriirto hawsha ugu fiican. Marka loo qeybiyo rhizomes waa in aanad isticmaalin majarafad oo keliya u kala qaybsanaanta xididka. Dhirta ayaa hubaal u dhiman doonta.
Si aad u qaybiso xididka, waxaad u baahan tahay inaad ku qodo horaanta guga ama dayrta iyo si tartiib ah, iyada oo aan waxyeello kelyaha, u kala qaybin gacmahaaga ama ku jar mindi fiiqan. Iyo meelahaas oo ah meesha uu geedka ku dhaawacmay, waxay u baahan tahay in lagu daaweeyo dambaska.
Xaqiiqo xiiso leh! Darajooyinka iftiinka ah (casaan iyo caddaan) ayaa ah kuwa ugu nugul ee dhalmada.
Delphinium waa warshad aad u xiiso leh, beerashadooda waxay bilaabi kartaa oo keliya ma aha oo kaliya qaybta rhizome, laakiin sidoo kale laga bilaabo abuurka. Daabacaadda abuurku waa habka ugu macquulsan. Haddii aad rabto inaad abuurto miraha delphinium, ka dibna waa in la sameeyaa March. Heerkulka ugu fiican ee aad ka dhigi karto dhirta - iyo + 12- +15. In sanduuqyada iyo dheriyada waa in lagu beeray abuurka dhif ah, meel fog oo raaxo leh, maadaama uusan jeclayn dad badan. Ma jiro daryeel gaar ah for geedo sida, sida caadiga ah, kaliya u baahan tahay waraabin joogta ah.
Geedaha waa in lagu beddelaa Juun, laakiin geeddi-socodkani wax yar ayaa la dardar-gelin karaa loona beddelaa "xannaanooyinka" bisha May, halkaas oo aad ku hayn karto ilaa xilli-xiga, iyo gu'ga xoogga leh ee ku filan ee gu'ga ayaa lagu beddeli karaa meelo joogto ah oo raaxo leh.
Sannaddii kowaad ee dhalmada abuur, dhirta ubaxyada liidata. Waqtigaan, waxay kordhiyaan isudhiga iyo cagaarka. Sannadka labaad, delphinium ayaa ku farxi doona midabka 2 jeer - bisha Luuliyo iyo Agoosto (waxay dhammaan ku xiran tahay kala duwanaanta). Haddii aad go'aansato in aadan ku tinker ah geedo iyo ku beeraan abuurka isla markiiba ciidda, ka dibna waa inaad diyaar u ah this. Ugu horreyntii, waxaad u baahan tahay inaad diyaariso meel aad ku abuuri doonto abuurka. Bacriminta waa in lagu dabaqaa aaggan, oo leh dambas alwaax, oo waxaa lagu qodi karaa 30 cm qoto dheer.
Dalagyada noocan oo kale ah waxaa lagu sameeyaa saldhiga loogu yeero saldhigyada fadhiga, grooves. Waxay u baahan yihiin in lagu daadiyo ka badan inta laga beeri. In grooves ah ee abuurka bas beertu u baahan tahay in la beeray dhif ah, oo leh gacmaha cilladeysan. Si loo dedejiyo geedi socodka biqilka, cabsiyadan waxay u baahan yihiin inay ku daboolaan wax aan la taaban karin ama filim. Ka dib markii 20 -25 maalmood, marka qoyaan, caleemaha koowaad ee delphinium soo muuqan doonaa 2-3 maalmood kasta. Taas ka dib, waad ka saari kartaa hoyga.
Xagaaga oo dhan waa inaad eegto caleemaha yar yar. Ugu abaarta ugu yar - biyo, inta badan bacrimiya. Iyo sanadka soo socda, guga, waxaa laguu beddeli karaa meelo joogto ah.
Waa muhiim! Waqtiga dhalmada ee tayada miraha ee midabaynta hoos u dhaca iyo furitaanka ubax ayaa lumay.
Waa maxay deriska si ay u doortaan delphinium
Delphinium waxaa inta badan lagu beeray kooxo guruub ah. Tan iyo dhirta ay sareeyso, badanaa waa asalka. Waxay u egtahay in ay ku fiican tahay sariiraha ubaxyada waaweyn iyo qurxinta qurxinta yaryar.
Baska waxaa lagu daraa inta badan dhirta sanadlaha ah iyo inta badan. Laakiin waxaa jira hal xaaladood oo muhiim ah - deriska ayaa ka soo horjeeda midabka, qaabka, laakiin aan dherer lahayn. Waa inay noqdaan kuwo ka yar ama la siman yahay dhererka dolphinium.
Delphinium waa wax aan la qabin ee xulashada lamaanayaasha, tusaale ahaan, waxaa lagu beeray karaa meel ku xigta geedkii laftirka ama lafdhabarta, waxay u muuqdaan kuwo aad u qurux badan.
Sidoo kale, sifeynta sariirta ubaxa ah, waxaad ku dhali kartaa qashin meel u dhow germany yar, hadana si fiican ayay u xoojineysaa midabada noocan oo kale ah. Laakiin isku-dhafan oo kala-duwan oo kala-gedis ah ayaad helaysaa adoo dhigaya tuubeeyaha oo ay weheliyaan fennel, valerian ama caws cagaaran, caws cagaaran, cuff and creopsis. Marka delphinium Blooms, waxay abuuri doonaa muuqaal qurux iyo sharaf leh, ka dhigeysa ka qaybgalaha ugu weyn ee soo bandhigidda ubax ah ee muuqaalkaaga.